ပိုစ့်မျိုးစုံ ပေးရင်း အကြည့်တွေကို ဖမ်းစား လိုက်ပြန် တဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော်မလေး အိချောပို – Let Pan Daily
ပိုစ့်မျိုးစုံ ပေးရင်း အကြည့်တွေကို ဖမ်းစား လိုက်ပြန် တဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော်မလေး အိချောပို
အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ အမြဲလိုလို ကလေးဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေ ကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက တစ်ခဲနက်ဝန်းရံအားပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးသူတွေက ချစ်စနိုးနဲ့ စူစူလို့ ခေါ်ကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
စူစူရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပညာတွေဟာလည်း တစ်ကား ထက်တစ်ကား တိုးတက်ပီပြင်လာတာကြောင့်လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ အဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို Covidကာလမှာတောင် အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ စူစူက အားလပ်ချိန်လေးတွေမှာ အလန်းစားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ Tiktok ဗီဒီယိုလေးတွေ ကို ရိုက်ကူးတင်ပေးလေ့ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ယနေ့မှာလည်း စူစူက အိမ်ရှေ့ ဝရန်တာလေးမှာ အမိုက်စား ပိုစ့်ပေးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာပါ။ သူမရဲ့ ဖွံ့ထားလှပတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေပေါ်လွင်နေအောင် ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်တွေအပြင် ” မင်းချစ်တယ်လို့ပြောတိုင်း ဒီကောင်မလေးပိုပိုလှလာပါစေ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားပါသေးတယ်။ ကဲ…ပုရိသပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုပြီး ရင်ဖိုလှိုက်မောစေဖို့အတွက် အိချောပိုရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေနော်……. ။
အမိုက္စားေကာက္ေၾကာင္းအလွေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသူကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး အိေခ်ာပိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ အၿမဲလိုလို ကေလးဆန္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အမူအရာေလးေတြ ေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြက တစ္ခဲနက္ဝန္းရံအားေပးေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမကို ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးသူေတြက ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ စူစူလို႔ ေခၚၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
စူစူရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ပညာေတြဟာလည္း တစ္ကား ထက္တစ္ကား တိုးတက္ပီျပင္လာတာေၾကာင့္လည္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြ အဆက္မျပတ္႐ိုက္ကူးေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို Covidကာလမွာေတာင္ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ စူစူက အားလပ္ခ်ိန္ေလးေတြမွာ အလန္းစားပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ Tiktok ဗီဒီယိုေလးေတြ ကို ႐ိုက္ကူးတင္ေပးေလ့ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ယေန႔မွာလည္း စူစူက အိမ္ေရွ႕ ဝရန္တာေလးမွာ အမိုက္စား ပိုစ့္ေပးထားတဲ့ ပုံေလးေတြကို တင္ေပးလာတာပါ။ သူမရဲ႕ ဖြံ႕ထားလွပတဲ့ ေကာက္ေၾကာင္းအလွေတြေပၚလြင္ေနေအာင္ ဓာတ္ဖမ္းထားတဲ့ အလန္းစားပုံရိပ္ေတြအျပင္ ” မင္းခ်စ္တယ္လို႔ေျပာတိုင္း ဒီေကာင္မေလးပိုပိုလွလာပါေစ ” ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုလည္း ေရးသားထားပါေသးတယ္။ ကဲ…ပုရိသပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရႈၿပီး ရင္ဖိုလႈိက္ေမာေစဖို႔အတြက္ အိေခ်ာပိုရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါရေစေနာ္……. ။
ခါးေသးေသးေလးကိုလႈပ္ယမ္းၿပီး တီးလုံးေလးအတိုင္း စည္းခ်က္ညီညီကေနတဲ့ ႏြယ္ႏြယ္ထြန္းရဲ႕ဗီဒီယိုေလး
မြင်သူတိုင်း သဘောကျ စေမယ့် လွတ်လွပ် ပေါ့ပါးနေ တဲ့ မေမြင့်မိုရ် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
ရုတ်တရက် မျက်နှာ တစ်ခြမ်း လေဖြန်းသွား ခဲ့ရတဲ့ လူရွှင်တော် ငြိမ်းချမ်း